Black Magic: ပန်းသီးနဲ့ပေါင်းတင်မယ်..၊
Posted by Black Magic | Posted in ကျန်းမာရေး , ဗဟုသုတများ , အလှအပ | Posted on 2:40 PM
သင့်အသားအရေက နွမ်းနယ်ပင်ပန်းပြီး အိုမင်းရင့်ရော်နေရင် ပန်းသီးနဲ့ ပျားရည်ရောပြီး ပေါင်းတင်ပေးပါ။ သင့် ရဲ့အသားအရေ သိသိ သာသာ တင်းရင်း စိုပြေလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပန်းသီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဘီနဲ့ စီ တို့ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားက အဲဒီ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေကို ပိုမို စုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် ထိခိုက်မှုကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။ ပန်းသီးမှာ ဂလိုင်ကိုးလစ်အက်စစ်လည်း ပါဝင်တဲ့အတွက် အသားအရေကို ကြေးချွတ်နိုင်စွမ်း
ရှိပြီး မွေးညင်းပေါက်တွေကို သန့်စင်စေပါတယ်။
ပျားရည်မှာ ဘက်တီးရီးယား ဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အစွမ်း ရှိပါတယ်။ ပျားရည်ဟာ အရေပြားရှိ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ကင်းစင်စေပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပျားရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေက ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကြောင့် အရေပြား ထိခိုက်မှု မရှိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ . . .
(၂) ပျားရည်လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်း
ပြုလုပ်နည်း လေးကတော့ . . .
*ပန်းသီးကို အခွံခွာပြီး ပါးပါးလှီးကာ မွှေစက်ထဲ ထည့်မွှေပါ။
*ပြီးရင် ပျားရည်ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း ရောမွှေပေးပါ။
*အဲဒီအရောအနှောကို သင့်မျက်နှာပေါ် လိမ်းပေးပါ။
*အချိန် ၁၀-၁၅ မိနစ်ကြာမှ ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်ပါ။
**အသားအရေ တင်းရင်းစိုပြည်လာတာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။**